सीडीओको सत्ता- विचार - कान्तिपुर समाचार
२०४६ को परिवर्तनपछि नागरिक प्रशासनको अवधारणा आयो र सीडीओमाथि कार्यव्यवहार रूपान्तरण गर्ने दबाबबढ्यो । यसका बाबजुद पनि ‘माथि’को निर्देशन र पहुँचको खेल हुँदै रह्यो । पहिले दरबारको कुन गुटका मान्छे हुन् भनेर जिल्लामा चिनारी दिइन्थ्यो भने यसकालमा दल विशेषका ‘भित्रिया’का रूपमा छाप छाडिन्थ्यो । अर्थात सीडीओ पदमार्फत केन्द्रीय सत्ताका सूत्रधारहरूले भुइँ सतहसम्म आफ्नो पहुँच, पकड, प्रभाव कायम राख्न चाहिरहे ।
अहिलेसम्म जिल्लामा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सीडीओले काम गर्ने व्यवस्था रहेकाले शान्ति सुरक्षा, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका काममा सहयोग गर्ने, विभिन्न ऐन अन्तर्गतका मुद्दा हेर्नेगरी अर्धन्यायिक अधिकारसमेत रहँदै आयो । राज्यका तर्फबाट नागरिकलाई सेवासुविधा सरल र सहज रूपमा प्रदान गरी सरकार र नागरिकबीच पुलका रूपमा स्थापित गर्ने कानुनी प्रावधानरह्यो । जिल्लास्थित न्यायिक, संवैधानिक र सैनिक बाहेक अरू जिल्लास्तरीय कार्यालयको विभागीय प्रमुखका रूपमा रही निर्देशन, नियन्त्रण र समन्वय जिल्ला प्रशासनका प्रमुखले गर्दै आए ।
गणतान्त्रिक परिवेशमा सीडीओ पद र संस्थालाई कसरी नागरिकमैत्री बनाउने ? संघ र प्रदेशबीच यिनको कार्यक्षेत्रको सीमा र सन्तुलन के हुने ? प्रदेशहरूले सीडीओलाईआफ्नो सहयोगी संस्थाका रूपमा कसरी ग्रहण गर्ने ? सीडीओमा केन्द्रीकृत शक्तिको विकेन्द्रीकरण कसरी गर्ने ?